Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Tel Aviv ilaa Dubai: Duulimaadka cusub ee Emirates
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Emirates ayaa maanta ku dhawaaqday inay bilaabi doonto duulimaad maalinle ah oo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya Dubai iyo Tel Aviv, Israel, laga bilaabo 6 December.
Tel Aviv iyo Dubai waxa ku xidhi doona duullimaad cusub oo aan kala joogsi lahayn oo maalinle ah oo ay samaynayso Emirates Airlines.
Duulimaadyo cusub ayaa ku xidhi doona Tel Aviv oo leh 30 albaab oo Emirates ah oo adduunka ah.
Emirates SkyCargo waxay bixin doontaa 20 tan oo xammuur ah waddo kasta oo u dhaxaysa Tel Aviv iyo Dubai.
Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo Imaaraadka iyo Israa’iil ay sii wadaan horumarinta iskaashi dhaqaale oo ballaaran si loo kiciyo kobac dhinacyo kala duwan leh, marka lagu daro kor u qaadista isu socodka ganacsiga ee labada dal. Duulimaadyada cusub ee maalinlaha ah, dadka safarka ah ee Israa'iil waxay awoodi doonaan inay si badbaado leh, si aan kala go' lahayn oo hufan ugu xidhmaan Dubai, iyo iyagoo sii maraya Dubai ilaa Imaaraad' shabakad caalami ah oo ka badan 120 goobood. Waqtiyada duulimaadka ee ku socda/ka imanaya Tel Aviv waxay siin doontaa socotada helitaan ku habboon meelaha firaaqada ah ee ka baxsan Dubai sida Thailand, Jasiiradaha Badweynta Hindiya iyo Koonfur Afrika, iyo kuwo kale.
Intaa waxaa dheer, duullimaadyada cusub waxay soo bandhigayaan isku xirka ku habboon ee soo gelitaanka Tel Aviv ee ku dhow 30 albaabbada Emirates ee Australia, Mareykanka, Brazil, Mexico, India iyo Koonfur Afrika, oo dhammaan hoy u ah qaar ka mid ah bulshooyinka Yuhuudda ee ugu weyn adduunka. Dadka safarka ah ee ka imanaya Maraykanka ee doonaya in ay ku hakadaan Dubai ka hor intaysan bilaabin safarkooda hore ee Tel Aviv waxay ka faa'iidaysan karaan xirmada Dubai Stop Over, oo ay ku jiraan joogitaanka hudheelo heer caalami ah, dalxiis, iyo waxqabadyo kale.
Dubai sidoo kale waxay sii wadaa inay soo jiidato dadka safarka ah ee wakhtiga firaaqada ah ee Israel iyada oo liiskeeda sii kordhaya ee khibradaha, oo ay ku jirto martigelinta Expo 2020 Dubai oo soo jiidatay in ka badan 2 milyan oo booqashooyin ah bishii ugu horeysay. Israa'iil waxay ka qaybqaadanaysaa Expo 2020 Dubai oo ay ku leedahay pavilion waddankeeda hoos yimaada mawduuca 'isku xirka fikradaha - abuurista mustaqbalka'.
Duulimaadyada cusub ee Emirates ayaa sidoo kale kor u qaadi doona isku xirka bulshada ganacsiga ee labada dal, abuurista wadooyin cusub oo isku xidhka iyo abuurista fursadaha maalgashi ee warshadaha. Furitaanka safarka fiisaha la'aanta ah ee u dhexeeya labada waddan iyo fududaynta xannibaadaha shabakadda Emirates, adeegyada cusub waxay dabooli doonaan baahida safarka mustaqbalka ee gudaha iyo ka bixista Tel Aviv.
Duulimaadku waxa ay geyn doontaa diyaaradeeda casriga ah ee Boeing 777-300ER oo ah qaab saddex dabaq ah, iyada oo bixisa suuliyaal gaar loo leeyahay oo fasalka koowaad ah, kuraas siman oo jiif ah oo fasalka ganacsiga ah iyo kuraas ballaadhan oo dabaqadda dhaqaalaha ah si ay ugu adeegaan macaamiisha jidka u dhexeeya Dubai iyo Tel Aviv. Duulimaadyada maalinlaha ah ayaa loo qorsheeyay inay ka ambabaxaan Dubai sida EK931 saacadu markay tahay 14:50hrs, iyagoo imanaya garoonka Ben Gurion 16:25saac wakhtiga maxaliga ah. Duulimaadka soo laabashada ee EK 932 waxa ay ka bixi doontaa Tel Aviv 18:25hrs, iyada oo iman doonta Dubai 23:25 saacadood wakhtiga maxaliga ah.
Macaamiisha Emirates waxay sidoo kale ka faa'iidaysan doonaan iskaashiga codeshare ee shirkadu la leedahay flydubai. Codeshare-ku wuxuu siiyaa dadka safarka ah isku xirnaan gaaban oo aan toos ahayn oo ka socda Dubai si ay u dhibciyaan shabakadaha isku dhafan ee labada shirkadood, kuwaas oo maanta ka kooban 210 goobood oo ku yaal 100 waddan.
Shirkaddu waxa ay geyn doontaa diyaaradeeda casriga ah ee Boeing 777-300ER oo ah qaab saddex dabaq ah, iyada oo bixisa suuliyaal gaar loo leeyahay oo fasalka koowaad ah, kuraas siman oo dabaqa ganacsiga ah iyo kuraas ballaadhan oo dabaqadda dhaqaalaha ah.
Adnan Kazim, oo ah madaxa ganacsiga ee Emirates Airline ayaa yiri“Imaaraadku aad ayay ugu faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan in Tel Aviv, mid ka mid ah albaabada muhiimka ah ee gobolka, ay tahay meesha ugu cusub. Bilawga adeegyada dhowr toddobaad gudahood, Emirates waxay siin doontaa fursado badan oo dadka socotada ah si ay si fiican ugu duulaan ugana soo duulaan Tel Aviv iyagoo sii maraya Dubai. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaan soo dhaweyno ganacsiyo badan iyo safarro firaaqo ah oo ka imanaya Israel ilaa Dubai, iyo ka sii gudbida meelaha kale ee shabakada Emirates.
Wuxuu ku daray: "Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelino UAE iyo mas'uuliyiinta Israel taageeradooda, waxaana sugeynaa fursadda aan ugu adeegno Israel oo aan u furno rajooyin badan oo labada waddan ah si ay u sii wadaan dhisidda xiriir adag iyada oo la kobcinayo ganacsiga iyo ballaarinta dalxiiska mustaqbalka dhow."
Marka laga soo tago hawlaha rakaabka, Emirates SkyCargo waxay bixin doontaa 20 tan oo awood xamuul ah si kasta oo u dhexeeya Dubai iyo Tel Aviv Boeing 777-300ER si ay u taageerto dhoofinta daawooyinka, alaabada teknoolajiyada sare, khudaarta iyo waxyaabaha kale ee halaagga ah ee Tel Aviv. Duulimaadyada ayaa sidoo kale la filayaa inay u qaadaan alaabta ceyriinka ah iyo qaybaha, semiconductors iyo xirmooyinka e-ganacsiga ee Israel.
Dadka safarka ah ee tagaya ama ka imanaya Israa’iil waxay sugi karaan inay la kulmaan adeegga ku guulaysta abaal-marinaha ee Emirates iyo warshadaha hormuudka ka ah wax soo saarka hawada iyo dhulka dhammaan fasallada, oo leh suxuun heer gobol ah oo loo waxyooday iyo cabitaanno dheeri ah, iyo sidoo kale ikhtiyaarka cuntada kosher ee dusheeda. Diyaaradda baraf nidaamka madadaalada inflight wuxuu bixiyaa in ka badan 4,500 kanaal oo madadaalada la rabo oo ku qoran in ka badan 40 luqadood, oo ay ku jiraan filimada, bandhigyada TV-ga, iyo maktabad muusig oo ballaaran oo ay la socdaan ciyaaraha, buugaagta maqalka iyo podcasts.
Emirates waxay si buuxda u soo celisay shabakadeeda Bariga Dhexe waxayna hadda u duushay 12 magaalo oo gobolka ah.
Tel Aviv waa magaalada ugu weyn uguna dadka badan Israel, waana xarunta dhaqaalaha iyo tignoolajiyada ee dalka. Magaaladu waxay soo jiidatay in ka badan 4.5 milyan oo soo booqday 2019, sida ay sheegtay Wasaaradda Dalxiiska ee Israel. Tel Aviv waxa ay caan ku tahay xeebaheeda qaaska ah, goob-cunto-cunto oo kobcaysa, muuqaalo dhaqameed, iyo ururinta ugu wayn adduunka ee 4,000 oo saxeex oo ah dhismayaasha qaabka Bauhaus, kuwaas oo noqday goobta Dhaxalka Adduunka ee UNESCO. Magaaladu sidoo kale waa xarun horumarsan oo sayniska iyo tignoolajiyada hormuudka ah, oo leh nidaam ganacsi oo xoog leh iyo nidaam deegaan bilow ah kaas oo soo saaray hal-abuuro iyo badeecado laga qaatay adduunka oo dhan iyo qaybo badan oo kala duwan.
Macaamiisha u safraya ama ka imanaya Israa'iil waxaa lagula talinayaa inay hubiyaan shuruudaha safarka ee ugu dambeeyay halkan